“Aza Manahy fa Izaho no Andriamanitrao” (Isaia 41:10)
“Aza matahotra fa momba anao aho. Aza manahy fa izaho no Andriamanitrao. Hanatanjaka anao aho ka hanampy anao.”—ISAIA 41:10. *
HIRA 7 Jehovah, Herinay sy Tanjakay
1-2. a) Inona no vokany rehefa nitadidy ny Isaia 41:10 i Yoshiko? b) Nataon’i Jehovah ho an’iza io andinin-teny io?
NAHENO vaovao ratsy ny anabavy atao hoe Yoshiko. Nilaza taminy ny dokoterany hoe volana vitsivitsy sisa izy no ho velona. Ahoana no nataon’i Yoshiko? Tadidiny ny Isaia 41:10. (Vakio.) Anisan’ny andinin-teny tiany indrindra mantsy io. Tony tsara izy avy eo nilaza tamin’ilay dokotera hoe tsy matahotra, satria mihazona mafy ny tanany i Jehovah. * Nampahery an’io anabavy tsy mivadika io ilay andinin-teny, ka natoky tanteraka an’i Jehovah izy. Afaka manampy antsika ho tony koa izy io, rehefa miatrika olana tena mafy isika. Nahoana? Handinika an’izany isika ato. Hodinihintsika anefa aloha hoe nahoana i Jehovah no nilaza an’ireo teny ireo tamin’i Isaia.
2 Nasain’i Jehovah nanoratra an’ireo izy, mba hampaherezana ny Jiosy hoentina ho babo tany Babylona. Tsy nataon’i Jehovah ho an-dry zareo ihany anefa ireo teny ireo, fa ho an’ny mpanompony rehetra tatỳ aoriana koa. (Isaia 40:8; Rom. 15:4) Miaina amin’ny “fotoan-tsarotra tsy mora setraina” isika izao, ka vao mainka mila ny fampaherezana ao amin’ny bokin’i Isaia.—2 Tim. 3:1.
3. a) Inona avy no ampanantenain’i Jehovah ao amin’ny Isaia 41:10? b) Nahoana isika no mila an’ireo fanomezan-toky ireo?
3 Ny Isaia 41:10 no nofidina ho andinin-teny ho an’ny taona 2019. Misy zavatra telo manatanjaka ny finoana ampanantenain’ i Jehovah ao amin’izy io: 1) Homba antsika izy, 2) izy no Andriamanitsika, ary 3) hanampy antsika izy. Tena mila an’ireo fanomezan-toky * ireo isika. Manana olana mantsy isika eo amin’ny fiainantsika, hoatran’i Yoshiko. Tsy vitan’izany fa mizaka ny vokatry ny zava-mitranga eto amin’ity tontolo ity koa isika. Misy amintsika aza enjehin’ny fitondram-panjakana tena mahery be. Andao àry hodinihintsika tsirairay ireo toky omen’i Jehovah ireo.
“MOMBA ANAO AHO”
4. a) Inona no fanomezan-toky voalohany hodinihintsika? (Jereo koa ny fanamarihana ambany pejy.) b) Ahoana no fomba ilazan’i Jehovah hoe tia antsika izy? d) Ahoana no fahitanao an’izany?
4 Voalohany, manome toky antsika i Jehovah hoe: “Aza matahotra fa momba anao aho.” * Ahoana no ampisehoany an’izany? Mijery tsara an’izay manjo antsika izy, sady tena miahy antsika ary maneho fitiavana antsika. Jereo ange ny fomba ilazany an’izany e! Hoy izy: “Sarobidy eo imasoko ianao ka mendrika hohajaina, ary tia anao aho.” (Isaia 43:4) Tena tia antsika izy, ary tsy misy na inona na inona eo amin’izao rehetra izao hahavita hampiova an’izany, na hahatonga azy hivadika amintsika. (Isaia 54:10) Ho be herim-po isika rehefa mahazo toky hoe tian’i Jehovah sady ataony namana. Hiaro antsika izy, hoatran’ny niarovany an’i Abrahama namany. Hoy i Jehovah taminy: “Aza matahotra, ry Abrama [Abrahama]. Izaho no ampinganao.”—Gen. 15:1.
Rehefa ampian’i Jehovah isika dia hahavita hiatrika an’izay olana mitranga, na dia toy ny renirano manafotra sy afo mivaivay aza izy ireny (Fehintsoratra 5-6) *
5-6. a) Inona no porofo hoe te hanampy antsika amin’izay olana mahazo antsika i Jehovah? b) Inona no ianarantsika avy amin’i Yoshiko?
5 Te hanampy anao hiatrika an’izay olana mahazo anao i Jehovah. Efa nampanantena mantsy izy hoe: “Raha miampita rano ianao, dia homba anao aho, ary raha miampita renirano ianao, dia tsy hanafotra anao ireny. Raha mandeha eo amin’ny afo ianao, dia tsy ho may, ary tsy handoro anao ny lelafo.” (Isaia 43:2) Inona no dikan’izany?
6 Tsy mampanantena i Jehovah hoe hesoriny ny zava-tsarotra. Na be dia be aza anefa ny olana, dia tsy havelany ho tototr’izy ireny tanteraka isika, ka ho toy ny hoe difotry ny “renirano.” Ary na dia mety ho tratran’ny fitsapana mivaivay toy ny “afo” aza isika, dia tsy havelan’i Jehovah hijaly mandrakizay. Manome toky izy hoe homba antsika, ka hanampy antsika handresy an’izay olana mitranga. Ahoana no hanaovany an’izany? Hampiany isika mba ho tony rehefa matahotra, amin’izay isika tsy hivadika aminy na dia mety ho faty aza. (Isaia 41:13) Nahatsapa an’izany i Yoshiko, ilay voaresaka teo. Hoy ny zanany vavy: “Tena gaga izahay hoe tony be i Mama. Hitanay mihitsy hoe nampian’i Jehovah izy dia nilamin-tsaina. Niresaka momba an’i Jehovah sy izay ampanantenainy izy mandra-pahafatiny. Noresahiny an’izany ny mpitsabo mpanampy sy ny marary hafa.” Inona no ianarantsika avy amin’izany? Ho be herim-po sy hanana hery hiaretana zava-tsarotra isika, raha matoky an’ilay fampanantenan’i Jehovah hoe: “Homba anao aho.”
“IZAHO NO ANDRIAMANITRAO”
7-8. a) Inona no fanomezan-toky faharoa hodinihintsika? Inona no dikan’ilay hoe “manahy”? b) Nahoana i Jehovah no niteny tamin’ireo Jiosy babo hoe: “Aza manahy”? d) Inona no voalazan’ny Isaia 46:3, 4 ka nanampy azy ireo ho tony?
7 Izao ilay fanomezan-toky faharoa nosoratan’i Isaia: “Aza manahy fa izaho no Andriamanitrao.” Ilay teny hebreo nadika hoe “manahy” dia midika hoe “miherikerika matetika satria mahimahina sao hisy loza”, na koa hoe “matahotra be dia mijerijery ny manodidina.”
8 Nahoana i Jehovah no niteny tamin’ireo Jiosy hoentina ho babo any Babylona hoe: “Aza manahy”? Satria hisy firenena matanjaka hanafika an’i Babylona, dia hatahotra daholo ny mponina ao. I Media-Persa ilay firenena, ary nampiasa an-dry zareo i Jehovah mba hanafahana ny vahoakany. (Isaia 41:2-4) Nanafika an’i Babylona ry zareo, rehefa akaiky hifarana ny 70 taona naha babo an’ireo Jiosy. Inona no nataon’ny Babylonianina sy ny olon-kafa, rehefa fantany hoe nanakaiky ny fahavalo? Te hifampahery ry zareo, dia samy niteny tamin’ny namany hoe: “Mahereza!” Tsy vitan’izany fa nanamboatra sampy betsaka kokoa ry zareo, satria nanantena hoe ireny no hiaro azy. (Isaia 41:5-7) Ary ahoana ny amin’ireo Jiosy babo? Nampian’i Jehovah mba ho tony ry zareo. Niteny tamin’izy ireo izy hoe: “Ianao kosa, ry Israely, dia mpanompoko [fa tsy hoatran’ireo firenena ireo]. ... Aza miherikerika noho ny tahotra [na aza manahy], fa izaho no Andriamanitrao.” (Isaia 41:8-10) Mariho ilay hoe: “Izaho no Andriamanitrao.” Nanome toky an’ireo mpanompony tsy nivadika i Jehovah tamin’izany hoe tsy nanadino azy ireo. Te hilaza izy hoe mbola Andriamanitr’izy ireo foana, ary mbola vahoakany izy ireo. Hoy koa izy: ‘Hitondra sy hamonjy anareo aho.’ Azo antoka fa nampahery an’ireo Jiosy babo ireo teny ireo.—Vakio ny Isaia 46:3, 4.
9-10. Nahoana isika no tsy tokony hatahotra? Hazavao amin’ny ohatra.
9 Manahy be tsy misy hoatr’izany ny olona amin’izao, satria miharatsy ny fiainana eran-tany. Miatrika ny olana atrehin’izy ireny koa isika. Tsy tokony hatahotra anefa isika, satria efa niteny i Jehovah hoe: “Izaho no Andriamanitrao.” Nahoana izany no tena manampy antsika ho tony?
10 Andao isika haka ohatra. Eritrereto hoe mandeha raoplanina i Faly sy Avotra. Lasa nahery be ny rivotra, dia nihetsiketsika be ilay raoplanina. Nisy filazana tamin’izay hoe: “Aza vahana mihitsy ny fehikibo fiarovana anareo. Mahery be mantsy izao ny rivotra, ary mety haharitra kely ilay izy.” Nitaintaina be i Faly! Nilaza indray anefa ilay mpitondra raoplanina hoe: “Aza manahy fa izaho no mitondra an’ity raoplanina ity.” Nihivingivin-doha fotsiny i Faly sady niteny hoe: “Ahoana moa aho no tsy hatahotra?” I Avotra anefa tsy rototra akory, ka nanontany azy i Faly hoe: “Fa ahoana ianao no tsy taitra mihitsy?” Nitsiky kely i Avotra namaly hoe: “Ka fantatro tsara izany miteny izany. Dadanay izany! Tena mahay mitondra raoplanina izy. Ao fa horesahiko anao ny mombamomba azy, dia tsy hatahotra intsony ianao amin’izay.”
11. Inona no ianarantsika avy amin’izay nitranga tamin’i Faly sy Avotra?
11 Inona no ianarantsika avy amin’io ohatra io? Tony hoatran’i Avotra isika satria mahafantatra tsara an’i Jehovah, ilay Raintsika any an-danitra. Fantatsika hoe na mafy toy inona aza ny olana mianjady amintsika amin’izao andro farany izao, dia hanampy antsika hiatrika an’izany izy. (Isaia 35:4) Matoky azy isika ka afaka ny ho tony foana, na dia mihorohoro aza ny ankamaroan’ny olona. (Isaia 30:15) Manao hoatran’i Avotra koa isika, ka resahintsika amin’ny olona hoe nahoana izy ireo no afaka matoky an’Andriamanitra. Ho resy lahatra koa izy ireo amin’izay hoe hanampy azy ireo i Jehovah, na inona na inona zava-tsarotra atrehin’izy ireo.
“HANATANJAKA ANAO AHO KA HANAMPY ANAO”
12. a) Inona ilay fanomezan-toky fahatelo? b) Mampahatsiahy antsika inona ilay hoe ‘sandrin’i Jehovah’?
12 Diniho ilay fanomezan-toky fahatelo hoe: “Hanatanjaka anao aho ka hanampy anao.” Ahoana no anatanjahan’i Jehovah ny mpanompony? Efa niresaka an’izany i Isaia ao amin’ny Isaia 40:10. Hoy izy: ‘Ho avy toy ny mahery i Jehovah, ary ny sandriny no hanjaka hisolo tena azy.’ Matetika no ampiasaina mba hilazana hery ny hoe ‘sandry’ ao amin’ny Baiboly. Ny hoe ‘ny sandrin’i Jehovah no hanjaka’ àry, dia mampahatsiahy antsika fa Mpanjaka tena mahery izy. Tsy misy maharesy azy. Nampiasa ny heriny izy taloha mba hanampiana sy hiarovana ny mpanompony. Mbola manome hery sy miaro an’izay mino sy matoky azy koa izy amin’izao andro izao.—Deot. 1:30, 31; Isaia 43:10.
Hiaro antsika ny sandry maherin’i Jehovah, ary tsy misy fiadiana hahatohitra azy io (Fehintsoratra 12-16) *
13. a) Rahoviana i Jehovah no tena manatanjaka antsika? b) Inona no toky nomen’i Jehovah, ka mampahery antsika sy manampy antsika tsy hanahy?
13 Rehefa enjehina isika no tena tanterahin’i Jehovah ilay teniny hoe: “Hanatanjaka anao aho.” Manao izay ho afany ny fahavalontsika any amin’ny firenena sasany amin’izao, mba hisakanana antsika tsy hitory na handrarana ny fivavahantsika. Tsy matahotra be loatra an’izay ataon’izy ireny anefa isika. Efa nanome toky mantsy i Jehovah hoe: “Tsy hisy hahomby izay fiadiana amboarina hamelezana anao.” (Isaia 54:17) Mampahery antsika izany sady manampy antsika tsy hanahy. Misy zava-dehibe telo koa ianarantsika avy amin’io tenin’i Jehovah io.
14. Nahoana no tsy gaga isika raha manafika antsika ny fahavalon’Andriamanitra?
14 Voalohany, mpanara-dia an’i Kristy isika, ka efa ampoizintsika hoe hankahala antsika ny olona. (Mat. 10:22) Efa niteny koa i Jesosy hoe henjehina mafy ny mpianany mandritra ny andro farany. (Mat. 24:9; Jaona 15:20) Faharoa, mampitandrina antsika io faminanian’i Isaia io hoe tsy hankahala antsika fotsiny ny fahavalo, fa hampiasa fiadiana isan-karazany mihitsy mba hamelezana antsika. Mamitaka antsika, ohatra, izy ireny, na manely lainga momba antsika, na mampijaly mafy antsika. (Mat. 5:11) Tsy hanakana azy ireo amin’izany i Jehovah. (Efes. 6:12; Apok. 12:17) Tsy tokony hatahotra anefa isika. Nahoana?
15-16. a) Inona no hevitra fahatelo tokony hotadidintsika, ary inona no lazain’ny Isaia 25:4, 5 momba an’izany? b) Inona no hiafaran’izay miady amintsika, araka ny Isaia 41:11, 12?
15 Ary inona ilay hevitra fahatelo tokony hotadidintsika? Nilaza i Jehovah hoe “tsy hisy hahomby izay fiadiana” ampiasaina hamelezana antsika. Mety hamely mafy antsika ny “olon-dozabe” nefa hiaro antsika i Jehovah, hoatran’ny manda miaro rehefa misy oram-baratra. (Vakio ny Isaia 25:4, 5.) Tsy hahavita hisakana antsika tsy hahazo fiainana mandrakizay mihitsy ny fahavalo.—Isaia 65:17.
16 Misy zavatra hafa koa ataon’i Jehovah, mba hanatanjahana ny finoantsika ka hahatonga antsika hatoky azy bebe kokoa. Resahiny amin’ny an-tsipiriany hoe inona no hiafaran’izay tezitra amintsika. (Vakio ny Isaia 41:11, 12.) “Ho lasa tsinontsinona sy ho levona” izy ireny. Tsy maintsy izay no hiafarany, na hiady amintsika hoatran’ny inona aza ry zareo.
Hatoky kokoa an’i Jehovah isika raha mamaky matetika momba azy, ao amin’ny Baiboly (Fehintsoratra 17-18) *
17-18. a) Nahoana ny famakiana Baiboly no manampy antsika hatoky kokoa an’i Jehovah? Manomeza ohatra. b) Inona no ho vokany raha misaintsaina ny andinin-teny ho an’ny taona 2019 isika?
17 Vao mainka isika hatoky an’i Jehovah, raha miezaka hahafantatra azy bebe kokoa. Ahoana no hanaovana an’izany? Mila mamaky tsara ny Baiboly sy misaintsaina an’izay novakintsika isika. Tena marina izay voalaza ao. Resahina ao, ohatra, hoe ahoana no niarovan’i Jehovah ny mpanompony taloha. Rehefa mamaky an’izany isika, dia lasa matoky hoe hikarakara antsika koa i Jehovah.
18 Diniho, ohatra, ny sarin-teny mahafinaritra ampiasain’i Isaia mba hilazana ny fomba iarovan’i Jehovah antsika. Ampitoviny amin’ny mpiandry ondry i Jehovah, dia isika mpanompony no ondriny. Hoy i Isaia: “Ny sandriny no hanangonany ny zanak’ondry, ka hotrotroiny eo an-tratrany ireny.” (Isaia 40:11) Mba alao sary an-tsaina ange hoe ianao ilay ondry trotroin’i Jehovah e! Tsy mahatsiaro ho tony sy voaro ve ianao, rehefa mamihina anao amin’ny sandriny mahery izy? Te hanampy antsika ny mpanompo mendri-pitokisana sy malina, amin’izay isika tony rehefa miatrika olana. Nofidin’izy ireo ho andinin-teny ho an’ny taona 2019 àry ny Isaia 41:10 hoe: “Aza manahy fa izaho no Andriamanitrao.” Saintsaino ireo teny mampahery ireo, dia hahazo hery hiatrehana an’ireo zava-tsarotra amin’ny hoavy ianao.
NAHOANA IRETO FANOMEZAN-TOKY AVY AMIN’I JEHOVAH IRETO NO MAMPAHERY ANAO?
“Momba anao aho.”
“Izaho no Andriamanitrao.”
“Hanatanjaka anao aho ka hanampy anao.”
^ feh. 5 Inona no hanampy antsika ho tony, na dia misy olana aza eto amin’ity tontolo ity na eo amin’ny fiainantsika? Manasongadina hevitra telo afaka manampy antsika ny andinin-teny ho an’ny taona 2019. Hiresaka momba an’izany ity lahatsoratra ity, ary hanampy antsika mba tsy hanahy be loatra fa hatoky kokoa an’i Jehovah. Saintsaino àry io andinin-teny io ary ezaho tadidina. Hampahery anao izany, ka hahavita hiatrika an’ireo zava-tsarotra amin’ny hoavy ianao.
^ feh. 1 Jereo Ny Tilikambo Fiambenana Jolay 2016, pejy 18.
^ feh. 3 FANAZAVANA: Ny hoe manome toky dia midika hoe milaza zavatra marina na mampanantena hoe tena hitranga ny zavatra iray. Rehefa manome toky antsika i Jehovah, dia lasa tsy manahy be loatra momba an’izay olana mety hitranga isika.
^ feh. 4 Miverina intelo ilay hoe “aza matahotra”, ao amin’ny Isaia 41:10, 13,14. Miverina imbetsaka ao koa ny hoe “izaho” sy “aho”, ary manondro an’i Jehovah ilay izy. Nahoana i Isaia no nasain’i Jehovah nampiasa matetika an’ireo teny roa ireo? Satria tiany hasongadina hoe raha matoky azy ihany isika vao ho tony, rehefa misy zavatra mampahatahotra.
^ feh. 53 SARY: Fianakaviana miatrika olana any am-piasana sy eny am-pitoriana ary any am-pianarana. Ny iray amin-dry zareo indray marary.
^ feh. 55 SARY: Vavolombelon’i Jehovah mivory ao amin’ny trano iray. Tonga ny polisy nefa tony ry zareo.
^ feh. 57 SARY: Hahazo hery isika ka hahavita hiaritra an’izay olana mitranga, raha tsy manadino manao Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana.